S na-aghọgburu site MySpace | Martech Zone
Monday, September 11, 2006 Sọnde, Septemba 30, 2012 Douglas Karr
Aga m ebido n’ikwu na MySpace anaghị amasị m. N'ezie, enweghị m ike iguzo MySpace. Enwere m akaụntụ MySpace ka m nwee ike ịmata nwa m nwoke, ndị enyi ya, na ihe ọ na-ede na biputere. Ọ maara na ọ bụ ya kpatara ya, ọ dịkwa mma na nke ahụ. Ana m enye ya nnwere onwe dị ukwuu n'ịntanetị, na nloghachi, ọ naghị emebi ma ọ bụ jiri ntụkwasị obi m. Ọ bụ nnukwu nwa.
Ọ dị ka ihe niile m pịrị na MySpace anaghị azaghachi ma ọ bụ buru ibu. Njirimara onye ọrụ ahụ dị oke egwu. M na-agụ online na ọ bụ otu n'ime n'elu saịtị na net. Amachaghị m ihe kpatara ya, ọ jọgburu onwe ya.
Ugbu a ka eziokwu nke MySpace comes
1. MySpace abụghị nje virus.
2. MySpace.com bụ Spam 2.0.
3. Tom Anderson ekeghị MySpace.
4. Onye isi MySpace, Chris DeWolfe jikọtara ya na spam gara aga.
5. MySpace bụ mwakpo na Friendster.com.
So… winds up that na MySpace bụ naanị saịtị ejizi mee ka ego ehi maka mgbasa ozi. Mara mma ojoo? Nkọwa niile a dị na 'gwa ihe niile' site n'aka Trent Lapinski, onye nta akụkọ nke kpughere eziokwu banyere MySpace na Ndagwurugwu.
Shada dị mma? Ee, echere m otu ahụ. Ọbụna nastier bụ na ndị nwe MySpace, Akwụkwọ akụkọ, kwuru na ha na-anwa ikpuchi eziokwu ahụ site na iyi egwu na esemokwu iwu. Ọ dị mwute na otu ụlọ ọrụ mgbasa ozi… onye Iwu na-echebe yana ndị na-edebe 'eziokwu' ga-etinye aka na azụmaahịa ọjọọ a. Nke a bụ nsogbu ọzọ nye nnukwu ụlọ ọrụ mgbasa ozi… ikekwe ume ọzọ ikpeazụ nke nnukwu onye na-anwụ anwụ.